Eithopia oo Isku Dayaysa in ay Hanato Markaana War-Baahinta Soomalida… – HORNAFRIC MEDIA
Saraakiisha Sirdoonka Itoobiya u Jooga Safaaradooda Muqdisho ayaa maanta waxay ku casumeen Warbaahinta Soomalida Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde.
Sirdoonka Itoobiya ayaa u sheegay Warbaahinta kuwii u tagay in ay Itoobiya aysan ahayn Itoobiyadii hore loona baahan yahay in lala saan qaado Itoobiyada Cusub ee Amxaaradu Maamusho, Oramadununa Xukunka Hayso…
Saraakiisha Itoobiyaankaa waxay ilaaween in umada Soomaaliyeed ogyihiin in Dawlad Deegaanka Soomalida kaliya lasoo dhoobay Ciidamo badan oo Itoobiyaan ah…In wali aan la xirin dadkii Xusuuqa ka gaystay Itoobiya laakiin qaarkood la dalacsiiyay.
Xuusuuqa loo gaysto maalinkasta Soomalida ku nool Dalka Itoobiya ayaa ah mid umada Soomaalidu kawada dharagsan tahay..
Intaas waxaa dheer in Maalmo ka hor Addis-Ababa looga dabaal dagayay dagaalkii dhexmaray Soomaliya iyo Itoobiya 1977.
Wacyigalitaan oo ka dhacday Addis Ababa ayaa Amxaaradu uga dan lahayd si Mingise dalka dib loogu soo celiyo loona tuso Oramada in uu ahaa Halyay u dagaalamay Itoobiya.
Intaas waxaa dheer in Shir Qabiileed ay Amxaaradu ka abaabuleen Addis si ay u kala qaybiyaan Soomalida dagan Itoobiya taas oo ku tusaysa Nacaybka iyo Xumaanta Itoobiya wali ku hayso dhamaan Qowmiyada Soomalida.
Dhanka kale Amxaarada ayaa doonaysa in ay Go’doomiso Abiya Ahmed ama Oramada si hadafkaas loo gaarana waa in ay Amxaaradu ka shaqayso sidii la isugu diri lahaa Oramada iyo Soomaalida si markaas Abiy Ahmed u noqdo mid aan Garab haysan.
Amxaarada iyo Tigreyga ayaan marna wax u ogolaandoonin Oromada laakiin ku da-daalaya sidii ay u fashilin lahaayeen Abiy Ahmed.
Isku soo duub, Siyaasada Itoobiya ayaa moodaa mid aan waligeed is badalayn ayadoo wali faraha kula jirta arimaha gudaha ee Soomaliya.
Dhanka kale Hay’adaha Sirta iyo Maamulka hada ka dhisan Itoobiya ayaa doonaya in ay ka dhaadhiciyaan umada Soomaliyeed Fakir ka duwan ficilkooda foosha xun oo ay ku wadaan Qowmiyadaha Soomalida meel kasta oo ay joogaan…
Bal ila akhri waxay maanta lasoo Shir tagtay Hay’ada Sirta ee Itoobiya oo Fadhigoodu yahay Muqdisho…